Professor Mohammed Hassen, Hayyuun Oromoon qabdu keessa isa tokko |
Pirofeesar #Mahaammad Hasan Alii barsiisaa barnoota sadarkaa olaanaa fi hayyuu seenaati. Pirofeesar Mahaammad seenaa Oromoo irratti qorannoo gochuun kitaabotaa fi barruulee qorannoo adda addaa baayyee maxxansiise.
Pirofeesar Mahaammad Harargee, Gaara Mul’ataatti dhalate. Iddoon magaalaa Hararirraa 150km fagaatee argama. Akkuma ijoollee badiyaa kamuu, pirofeesar Mahaammad yeroo ijoollummaa loon tiksaa maatiisaa gargaara ture. Boodarra, gara magaalaa Hararitti galuun barnoota idilee jalqabe. Erga barnoota sadarkaa tokkoffaa Hararitti xumuree booda, leenjii barsiisotaa fudhachuudhaan eebbifamee barsiisuu eegale. Erga amma tokko barsiisee booda, barnoota sadarkaa olaanaa itti fufuuf Yuunivarsiitii Finfinnee gale. Yuunivarsiitii Finfinneettis, jalqabaa seera barachuuf yaadaa kan ture yoo ta’u boodarra garuu seenaa barachuuf murteessee seenaa barate. Barnoota seenaa xumuree erga digirii fudhatee booda, Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Jimmaatti barsiisaa ta’ee hojjate. Waggaa akkuma barsiiseen, mootummaan Dargiin duula ergaa waan tureef gara duulaa deeme.
Bara 1977tti, biyya Ingilaanditti digirii lammaffaa barachuuf kan deemee yoo ta’u barnoota maastersiis achumatti xumure. Biyya Ingilaandi erga waggaa saddeet jiraatee booda baqattoota Oromoo wajjin hojjachuuf gara Sudaan deeme. Sudaan keessas ji’a kudhan turee gara Ingilaanditti deebi’e, itti aanse gara Ameerikaa deemudhaan achi qubate. Bara 1985 nama biyyatti beeku fuudhudhaan haadha manaa godhate. Pirofeesar Mohaammad ijoollee dhiiraa lama qaba.
Pirofeesar Mahaammad, Ameerikaa keessatti yuunivarsiitii addaa addaa keessatti barsiisaa ture. Jalqaba Atilaantaa Yuunivarsiitii, Moorhaawus koolleejjii keessatti waggaa sadi’iif barsiisaa ture. Itti aansuun Niwuu Yoorki kan jiru Haanter Koolleejjii keessattis akkasuma waggaa sadi’i barsiise. Bara 1992 eegalee hanga ammaatti, Atilaantaa kan jiru Ji’oorjiyaa Isteet Yuunivarsiitii keessatti barsiisaa jira.
The Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia: 1300-1700 (Eastern Africa) May 19, 2017
The Oromo of Ethiopia: A History 1570-1860, March 1994
Seenaa Oromoo kan 1570-1860. Kan Afaan Oromootti hiike: Dawit Likkaasaa Bulchaa
Pilgrimage To The Abbaa Muudaa, Journal of Oromo Studies, Vol 12, Number 1 & 2, 2005
A Short History of Oromo Colonial Experience 1870’s – 1990’s: Part One 1870’s to 1935, Journal of Oromo Studies, Volume 6, Numbers 1 & 2, July 1999
A Short History of Oromo Colonial Experience: Part Two, Colonial Consolidation and Resistance 1935-2000, Journal of Oromo
Studies, Volume 7, Numbers 1 & 2, July 2000